Ọfịs nkasi obi ebighị ebi Ụkwụ ezumike maka n'okpuru oche - Ergonomic ebe nchekwa ụfụfụ ụkwụ stool ohiri isi maka ọrụ, egwuregwu, Kọmputa, Cubicle Office na Ụlọ - Ngwa ntụ ntụ ụkwụ ụkwụ
Gbaa ụkwụ gị elu, nwee mmetụta nke ụfụfụ ebe nchekwa: Ejiri ụfụfụ ebe nchekwa mee ya, ụkwụ anyị na-ezu ike n'okpuru tebụl na-eji okpomọkụ nke ahụ gị mee ka ọ dị nro ma kwekọọ n'ụkwụ gị maka nkasi obi zuru oke.
Ebe ala siri ike siri ike n'ụkwụ, oge a ga-emeso ha nke ọma: Ala dị larịị na-emepụta ebe nrụgide na-achọghị n'ụkwụ gị, ụkwụ na úkwù.Nweta enyemaka mgbu site na iji ebe mgbakwasị ụkwụ n'okpuru oche anyị
· Na-akwalite Mgbasa Ọkachamma: Ịnọdụ n'elu tebụl gị ogologo oge nwere ike iduga nhụjuanya na ahụ erughị ala n'ụkwụ na ụkwụ gị.Ezumike ụkwụ anyị nọ n'okpuru oche na-eme ka mgbasawanye, na-ewepụ ihe mgbu
· Na-akwalite Nhazi ahụ: Ụkwụ na ụkwụ gị kwesịrị ịgbatị n'akuku ka úkwù, azụ, na ubu gị kwekọọ.Site na ebe mgbakwasị ụkwụ anyị maka n'okpuru tebụl, a na-ebuli ụkwụ gị n'ọnọdụ ziri ezi
Ebere maka nkwado Arch: Ezubere izu ike ụkwụ nke nwere akwa anya mmiri ka ọ na-eme ka ọkpụkpụ anụ ahụ dị n'ụkwụ gị, na-ebelata ahụ erughị ala na ike ọgwụgwụ na mpaghara ahụ a na-echefukarị.
Ihe onwunwe echekwara echekwabara: N'ime nkwa anyị inye gị ihe dị oke mma, OEKO-TEX anwalela ezumike ụfụfụ ebe nchekwa anyị iji nweta akara ngosi STANDARD 100 ha chọrọ;Nke pụtara na akụkụ ọ bụla dị n'okpuru ebe a na-edebe oche oche bụ nke akwadoro nke ọma na enweghị mmerụ ahụ
2 n'ime 1 Kushion Ụkwụ: Enwere ike iji dị ka ezumike ụkwụ oche iji zuru ike ma ọ bụ tụgharịa ya ma jiri dị ka rocker kpalie ụkwụ na ụkwụ gị.
Ụkwụ kacha mma izu ike n'ụwa - Ọ bụ ezie na "ụfụ ebe nchekwa dị ọcha" ụkwụ na-adaba adaba n'oge a na-eji ya ma na-enye obere nkwado, ErgoFoam High Density Foam na-arụ ọrụ nke ọma iji nye gị nkwado kacha mma.
Ọrụ Site n'ụlọ na Nkasi Obi - ErgoFoam's ergonomic deskkwụ izu ike na-enye nkwado siri ike maka ụkwụ gị ma na-enyere aka hụ na oche gị kwụ ọtọ.Achọpụtara imeziwanye ọnọdụ gị iji belata mgbu na ike ọgwụgwụ n'azụ, ụkwụ, ụkwụ na ikpere gị, ọ ga-emekwa ka mgbasa ozi dịkwuo mma.
Akwụkwọ ikike ndụ - ErgoFoam bụ akwụkwọ ikike ndụ zuru oke na-akwado.Naanị zitere anyị foto nke okwu a na ErgoFoam ga-anọchi stool ụlọ ọrụ gị, enweghị ajụjụ.
Foam ebe nchekwa adịchaghị
Teknụzụ Na-anabata Okpomọkụ
Ala Na-adịghị Mfe
Enwere ike ịsacha igwe
Nke gara aga: Lipo Ab Board Post Surgery Liposuction BBL Foam na-enye bọọdụ mkpakọ afọ ime 360 ​​na ụfụfụ na-edobe bọọdụ afọ afọ mgbe Lipo Backboard gbakere.
Osote: Ụkwụ izu ike maka N'okpuru oche, Ụkwụ Stool maka oche na-arụ ọrụ, Ergonomic Nkwado Nkasi Obi Ụfụ Ụfụ Cushion with Hand, Footrest Rocker Pillow maka Ụlọ, Ụlọ ọrụ, Ụgbọ ala, Ụgbọelu na-ebelata Lumbar, azụ, mgbu ikpere.
Ohiri isi izu ike
ohiri isi izu ike na-agbanwe agbanwe
Ohiri isi ụkwụ
ohiri isi izu ike inflatable
inflatable njem ụkwụ ezumike ohiri isi
ebe nchekwa ụfụfụ ohiri isi ụkwụ ezumike maka n'okpuru oche
njem ohiri isi izu ike
Ụkwụ izu ike maka n'okpuru oche, stool maka oche a...
Ụkwụ izu ike maka n'okpuru oche / Ergonomic High-Rankin...
Ergonomic Foot izu ike n'okpuru oche na-abụghị Slip Su ...
Izu ike n'ụkwụ maka n'okpuru oche na-arụ ọrụ - F na-agbanwe agbanwe